Naing BSell | Item - Logitech Driving Force GT
အားကစားနှင့် ဂိမ်း ပစ္စည်းများ
Used PS3 Slim 160GB
Fan Game Pad
5 Liked Like Report
# Logitech Driving Force GT - SET # (SG Used)
For ; PS2 / PS3 / PC
Condition ;9/ 10 (100% Working Condition)
Driving Game တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Gammer တွေအတွက် Driving Console တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ အခု Product လေးက Brand နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Logitech ရဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Real Driving Experience အတိုင်းအနီးစပ်ဆုံးထိတွေ့ခံစားနိုင်မည့် Simulator Console လဲဖြစ်ပါတယ် . . . Left / Right 900ံချိုးကွေ့နိုင်ပြီ Center ကိုအလိုလျောက်ပြန်လည် ဆွဲယူပေးတဲ့ Feature အပြင် ကားအချိုးအကွေ့တွေနဲ့ အရှိန်အနိမ့်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီး steering ကို တစ်ကယ် ကားမောင်းရတဲ့ အထိအတွေမျိုးတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ controller က Game ဆော့တယ်ဆိုတာထက် ကားမောင်းတဲ့အခါကြုံတွေ့ရမယ့် သဘောတရားတွေကိုပါ နားလည်လာနိုင်စေတာကြောင့် Real Driving Simulator Console လို့ခေါ်ကြတာပါ။ သူနဲ့တွဲဖက်တဲ့ အဓိက Game ကတော့ "Grand Turismo 5/6" ပါ . . . တခြား Driving Game တွေနဲ့လဲတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Simulation training အတွက်ကတော့ "City Car Driving" simulator game ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း - 170,000ks (Official street price - 235S$)
အသေးစိတ် Feature လေ့လာနိုင်ရန် ;" http://gaming.Logitech.com/en-Sg/product/driving-force-gt-gaming-wheel "
Shipping ~ 4/6 weeks
ဈေးနှုန်းများမှာ ရန်ကုန်အရောက်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ် ... အသေးစိတ်သိလိုက Cb သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့လဲ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ....
Online Shopping & service
SG Office ; +6591270224 (viper)
YGN Office ; 09772861192
Collection Point ; အမှတ် ၂၄၄ /၅လွှာ ၊ ကျိုက်က္ကဆံလမ်းမ (#ကျောက်မြောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး)၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Hi am mrs lovett how u doing l want to know if this item still available for sale,kindly get back to me with the last price and the condition of the item email me back on (lovettpeter1234@gmail.com) looking forward to hear from you thanks.